Waa Maxay Lacagta Suuqa? ’Money market’ |
Inaad lacag abuurato ama sameyso ma ahan wax fudud. Laakiin hadana waa suurta gal, waxaana jira su’aalooyin badan oo ay dad badan isweydiiyaan maalin walbo oo illaahay keena. Waxaana ka mid ah siddee ku heshaa lacag. Sawabtoo ah dadka waxay aaminsanyihiin lacagta inay tahay waxa kali ee ay waxwalbo ku samaysani karaan. Waa sax lacagta waa wax aad waxwalbo ku samaysani karto haddii ay noqoto inaad guri iibsato, gaari iibsato, jaamacadaha ugu sareeyo dunidda inaad wax ka barato, waliba inaad xajka iyo dalxiis tagto meelwalbo oo aad u baahantahay.
Qoraagga ayaa si fiican u kala dhig-dhigay asigoo raba in bulshada tusiyo qiimaha ay leedahay in la abuuro ganacsi guulaysta. Maqaalkiisa ayaa si toos ah u taabanaaya ka jawaabida su’aalaha la xariira ganacsiga guulaysani kara, wuxuu yiri “Kasoo qaad inaad go’aansatay inaad ganacsi aad gaar u leedahay aad abuurto, halkeed kabilaabi? Maxaad ku bilaabi? Sideedse u bilaabi?, waa su’aalo ay muhiim tahay inaad iswaydiisid kolka aad bilaabaysid mashruucaaga. Waxaad xasuusnaataa wax kasta marka labilaabayo inuu ku bilaabmo fikrad ama aragti kugu soo dhacday.”
Haddii aad ka heshay maqaalkaan, fadlan ka dhiibo fikradaada si aan u ogaano inaad wax ka baratay!